Gudoomiyihii Shirkadda ‘Startup Grind’ Oo maanta Lagu Dilay magaalada Muqdisho | Afrikada
Gudoomiyihii Shirkadda ‘Startup Grind’ Oo maanta Lagu Dilay magaalada Muqdisho
Afrikada, Muqdisho: Waxaa maanta dadka ka nixiyey dil loo geystay mid ka mid ah dhallinyaradii ka soo laabatay Qurbaha, weliba ninka maanta la dilay ayaa nin fekrado badan oo horumarin ah dalka keenay.
Ninkan ayaa wadanka Soomaaliya keenay fekrado ganacsi, shirkadiisa ayaa la yiraahdaa Startup Grind. Arrintan oo ka nixisay qof kasta oo horumar la jecel dalkiisa.
Waxaa dilay dabley hubaysan oo goobta ka cararay, Ninka maanta la dilay ayaa lagu magacaabay Maxamed Maxamuud Sheekh Cali “Dable Pilot” waxaana lagu dilay Barxadda Baarka Spaghetti House oo ku yaalla meel ku dhow Isbitaalka Banaadir ee magaalladda Muqdisho.
Dadkii meesha joogey oo fiirsanayey sida dilku u dhacayo ayaa warbaahinta u sheegay in ay kooxo hubeysan rasaas huwiyeen marxuumkaasi, xilli uu gaarigiisa ku baarkimayey Barxadda la dhigta gawaarida ee Spaghetti House.
Wararku waxay sheegayaan in Maxamed Maxamuud Sheekh Cali ‘Dable Pilot’ rasaastu ka haleeshay Caloosha, isla markaana uu u geeriyooday dhaawacaasi.
Allaha U Naxariistee Maxamed Maxamuud Sheekh Cali Dable Pilot waxa uu Madax ka ahaa Shirkadda Dhallinyaradda ku dhiiri-gelisa Hawlaha Ganacsiga, wuxuuna ahaa Ganacsadihii ugu horreeyey ee magaalladda Muqdisho ka hirgeliya Goobaha Landariga ee sida casriga ah loogu dhaqo Dharka, gaar ahaan Jaakadaha (Laundry).
Haddii dilalkan ay sii bataan ayaa waxaa dib u noqon doona dad fara badan oo dalkooda u yimid si ay nabad uga dhaliyaan, hase yeeshee ma jiro jixin jix loo hayo dadkan oo aad moodo in Muqdisho uu wanaagga iyo karaamada nolosha ay ka sii suuleyso.
Marxuumka la dilay..Allaa ya raxma!